Tsy nanan-kohahina ve tany an'efitra?
"Ary tsarovy ny làlana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitrao anao... Dia nanome anao ny mana hohaninao [Izy], ... hampahafantarany anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona ; fa izay rehetra aloaky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona." Deoteronomia 8:2, 3
Ny boky faharoa ao amin'ny Baiboly, ny Eksodosy, dia manambara amintsika ny fomba nanafahan'Andriamanitra ny olony izay nandevozin'i Farao. Mba hahafaka azy ireo, dia tsy maintsy nivoaka an'i Egypta izy, namakivaky ny efitr'i Sinay, ary farany, niditra tao amin'ny tany nampanantenaina. Fa mba hahatratrarana izany tanjona izany, nahoana no nisy ireo tsy fahampiana, io fitokana-monina io, lavitra an'i Egypta, izay firenena nandroso fatratra?
Ny famakivakiana ny tany efitra dia kisarisarin'ny fiainan'ny mpino ankehitriny, eto amin'izao tontolo izao (1 Korintiana 10:6). Toy ny tsy maintsy nialan'io vahoaka io tany Egypta, ny kristiana koa, eo anivon'ny fiarahamonina naorina tsy misy an'Andriamanitra, dia tsy maintsy mandositra izay zavatra mifototra amin'"ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao" (1 Jaona 2:16).
Rehefa tafasaraka tamin'i Egypta ity vahoaka ity, nisy zavatra tsy ampy taminy ve? Tsia! Nianatra izy ireo hahafantatra Ilay Andriamanitry ny famindrampo, Izay nanome azy isanandro izay zavatra nilainy. Ny zavatra rehetra dia mety tsy ho ampy, tany an'efitra. Saingy isa-maraina dia nisy hanina mahagaga niparitaka teny amin'ny tany, dia ny mana izany, izay kisarisarin'ny Tenin'Andriamanitra mamelona ny kristiana. Andriamanitra nampiboiboika ho azy ireo, rano avy tamin'ny vatolampy, kisarisarin'ny Tompo Izay mamelombelona ny mpino amin'ny fanatrehany, sy azony antenaina isanandro (Matio 28:20).
Fa maro tamin'ny Israelita no tsy afa-po tamin'izay nomen'Andriamanitra azy. Tsy tsinjony intsony ny tanjon'ny dia, ka nanembona izay nohaniny tany Egypta aza izy, ary nanadino fa Andriamanitra dia nanafaka azy ireo tamin'ny fanandevozana.
Ry kristiana, mahatsiaro ho voarara tsy hanana izay omen'izao tontolo izao ve isika? Mahatsapa «tsy fahampiana» ve isika rehefa mandinika ireo fitahiana azontsika ao amin'i Kristy?